Iji WordTracker wuo Ajụjụ Gị na Ọzịza Ọdịnaya | Martech Zone
Tuzdee, Machị 1, 2016 Douglas Karr
Anyị na-akwụ ụgwọ maka ọtụtụ ngwaọrụ iji nyochaa ndị ahịa anyị ma anyị na-anwale ọbụna karịa. Oge obula m bidoro usoro nyocha isiokwu zuru oke, otu ngwa oru di nkpa mgbe nile. Anaghị m emetụ ya aka ruo ọtụtụ ọnwa… ma na-ekwe ka ndebanye aha… mana mgbe ahụ…
OkwuTracker bụ ihe dị mkpa n'ihi na enweghị m ike ịchọta ngwa ọrụ ọzọ nwere oke ịtụnanya, ọtụtụ ajụjụ ajụjụ ndị ọrụ ọchụchọ na-achọ maka isiokwu ọ bụla. Anyị atụlewo iwu a zuru ọdịnaya ọdịnaya maka akara gị - na isi ihe ịga nke ọma nke ọbá akwụkwọ ahụ na-aza ajụjụ ndị ọrụ nyocha ọchụchọ na-abanye. Ma, ka oge na-aga, ndị ọrụ na-enwetawanye ngwa ngwa na arịrịọ ha. Nke a bụ goldmine maka ahịa ọ bụla na-achọ iji mezue ọbá akwụkwọ ha.
N'ime ogwe na-acha anụnụ anụnụ nke OkwuTracker bụ nza nke ị nwere ike iji tinye ma wezuga okwu, tọọ ọkwa nchọta ọchụchọ, ma ọ bụ - ọkachasị - nzacha naanị isiokwu ajụjụ. Naanị tinye ajụjụ nyocha ajụjụ, ma a na-enye gị usoro dị egwu nke ajụjụ ndị kachasị ewu ewu na ọnwa gara aga.
Ọganihu! Nke a abụghị naanị ihe bara uru n'ihi ihe ndị mmadụ nyochaworo na akụkọ ihe mere eme, ọ nwekwara ike inye gị ndebiri maka ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ ọ bụla onye ahịa ahụ nwere ike ire. Dịka ọmụmaatụ, anyị na onye ahịa e-commerce na-arụ ọrụ ugbu a nke nwere ihe karịrị ọgwụ ọgwụ 10,000 na katalọgụ ha. Site na imebi usoro ajuju ajuju ajuju, anyi nwere ike ihu ihe omuma anyi aghaghi inye na ibe ahia obula ma obu ihe edere aka iche.
definition - Gịnị bụ [aha ngwaahịa]?
Efrata - Kedu ihe dị na [aha aha]?
Ọnụọgụ ọgwụ - Ego ole ka [aha ngwaahịa] dị mkpa iji belata [mgbaàmà]?
ngwa - Ndi [ngwaahịa aha] inyeaka [mgbaàmà]
Mgbaàmà - Kedu ka esi belata [mgbaàmà]?
Ugbu a, anyị nwere ike iwere nsonaazụ nsonaazụ ahụ ma tinye ya na ngwaahịa ọ bụla ha na-ere iji hụ na ha nwere ọba akwụkwọ ọdịnaya zuru ezu.
Tags: isiokwu ajụjụnnyocha nyochaajụjụwordtracker